Oonobumba → Impahla yokuthengisa • iP & M yobuchwephesha bokuhombisa
Iminqwazi yentengiso sisindululo esinomdla kwimpahla yokusebenza kunye neempahla zentengiso, ziya kuba yindibaniselwano ehambelanayo ye Iikipa, iihempe zepolo okanye ihembe. Sisibonelelo sabantwana, abafikisayo kunye nabantu abadala.
Amanqindi sisixhobo esithandwayo sokwazisa, kunye nemizobo nganye, zihlala zisisipho kubathengi nakwiikontraki. Olu hlobo lwegajethi alusebenzi kuphela, kodwa lunokuba sisixhobo esikhulu sentengiso, esonyusa ukuthandwa kwegama. Isipho esisebenzisekayo ngokuqinisekileyo siya kuvusa umanyano oluqinisekileyo kwaye, ngenxa yoko, sinokwandisa umdla kwinkampani.
Kwivenkile yethu uya kufumana iintlobo ezininzi zentloko, zombini ehlotyeni nasebusika. Phakathi kweminqwazi ye-baseball ene-visor, iminqwazi ethambileyo enomlomo, ii-visors, izikhafu, kunye neekepusi ezifakiweyo, ngokuqinisekileyo uya kufumana into efanelekileyo kuwe.
Sineemodeli zehlabathi kunye neemodeli zabantwana kubungakanani obuncinci.
Njengoninzi lwempahla kunye namalaphu kwivenkile yethu, ii-cap zinokuphawulwa ngayo nayiphi na imizobo okanye imibhalo ebhaliweyo. Senza imihombiso sisebenzisa indlela isambatho sekhompyuter okanye ukushicilelwa kwesikrini. Ngale nto, okokuqala sifuna isicatshulwa
ukubonelela ngemizobo kunye nokucacisa inani lokuhamba ngokumakisha,
ngokwendlela yemizobo efunyenweyo, senza umbono,
emva kokwamkela ukubonwa-siqala ukumakisha.
Sineyethu ipaki yomatshini, esenza ukuba sikwazi ukugqiba iodolo ngokukhawuleza, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezisi-7 zomsebenzi ukusukela oko intlawulo ifakiwe. Sibeka esweni inkqubo yemveliso yokumakisha kuwo onke amabakala, enkosi apho sikwazi ukusabela kwangoko kwimeko apho kungakho naluphi na utshintsho. Ukunxibelelana rhoqo nomxhasi, sinokufaka ngokukhawuleza naziphi na izilungiso.
Izimvo ezintle kunye neqela elandayo labathengi abaqhelekileyo liqinisekisa umgangatho ophezulu weemveliso kunye neenkonzo. Ukwaneliseka kwabathengi kubaluleke kakhulu kuthi, ke ngoko siya kwi-odolo nganye ngononophelo olukhulu.
Ukufaka iigrafiki ezizodwa kwiifowuni zentengiso kufuna amaxabiso ngamanye. Oku kuyalelwa kukhetho lwendlela yokumakisha, inqanaba lokuntsonkotha kweprojekthi kunye nomzamo ofunekayo. Ixabiso le-odolo linokwaziwa ngaphambi kokuba umsebenzi uqalise, amaxabiso asimahla kwaye awunyanzelisi nto. Iqela lethu liya kucebisa ngendawo yokumakisha, ukukhethwa kwemveliso elungileyo yendlela ekhethiweyo, kwaye enkosi kwiminyaka emininzi yamava, iya kuphendula le mibuzo ingekho semgangathweni.
I-allegro caps ngokuprintaiminqwazi yomqhaphu eprintiweyoii-caps ezisebenzayo kunye nokuprintaiminqwazi yenkampani eprintiweyoIminqwazi epheleleyo kunye nekripthi yakhoIminqwazi yabapheki enoshicileloIifowuni ezenziwe ngokwezifiso kunye nokuprintaiminqwazi yephepha eshicilelweyoiminqwazi yoboya ngoshicileloiminqwazi yentengiso enoshicileloIifowuni ze-snapback kunye neprinta yakhoiminqwazi yemidlalo eprintiweyoIminqwazi yabantwana baseball enoshicileloiminqwazi baseball kunye noshicileloIminqwazi ye-baseball yamadoda eprintiweyoiminqwazi baseball kunye noshicileloIminqwazi ye-baseball kunye neyakho eyiprintiweyoiminqwazi kunye noshicileloIminqwazi eneempazamoiminqwazi eprintiweyo yabantwanaiminqwazi kunye noshicilelo lweKrakowOonobumba abanoshicilelo lwewizardiminqwazi kunye noshicilelo lwentsanguiminqwazi yesiko eshicilelweyoiminqwazi kunye nepoznań eprintiweyoiminqwazi kunye noshicilelo lwaseWarsawiminqwazi kunye nokuprintwa kwe-visoriminqwazi yasebusika eprintiweyoiminqwazi kunye noshicilelo lwakhoiminqwazi kunye neyakho eyiprintiweyoIminqwazi enoprinta we-allegroiminqwazi yesikhephe ngoshicilelo lwakhoiminqwazi kunye neyakho eyabhalwa eWarsawiminqwazi yasebusika yamadoda eprintiweyoIminqwazi yasebusika eprintiweyoIminqwazi yasebusika eneempazamoIminqwazi yasebusika ngokuprintwa kwesikoiminqwazi ebusika eprinta eyakhoIminqwazi yasebusika ene-logo yakho ye-logoI-T-shirts kunye neefowuni kunye nokuprinta
5 / 5 ( 8 iivoti )